Fanohanana ara-bola maharitra | Reef Resilience
Ny famatsiana ara-bola maharitra amin'ny toeram-pivarotana haran-dranomasina dia mitaky loharanom-bola maharitra sy samihafa. Ny rafitra momba ny fitantanam-bola dia ahitana ny haba sy ny saran-dalana ara-barotra mifandraika amin'ny fizahantany, ny trosa trosa ho an'ny natiora, ny vola fitokisana amin'ny fitehirizana, ary ny fandoavam-bola ho an'ny tolotra ara-tontolo iainana, kanefa tsy misy ny vahaolana tokana ahazoana antoka ny fampandrosoana ara-bola. Tokony hampiavaka ny rafitra ara-bola mba hanohanana ny famatsiam-bola maharitra. Ohatra amin'ny rafitra fampindramam-bola ho fanohanana ny fitantanana ny renirano sy ny famerenana amin'ny laoniny:
(Loharano: Nifanaraka tamin'ny Spergel sy Moye 2004, Gallegos et al. 2005, sy CBD 2012).
Ny tanjona lehibe dia ny mamantatra ireo vahaolana izay mamerina ny fidiram-bola amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ary koa manohana ny tombontsoa iombonana amin'ny fiarahamonina sy sosialy. Ho fandinihina amin'ny antsipirihany ny loharanom-bola ivelan'ny loharanom-bola anisan'izany ny fandrosoana sy ny tsy fitoviana ary ny fanadihadiana Fiarovana ny harena an-dranomasinamanokatra fisie PDF . Na dia novolavolaina manokana aza izy ireo ho an'ny faritra voaaro an-dranomasina, dia manan-danja ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ihany koa izy ireo.
Fanombanana ny fepetra fanatanterahana ny fitantanam-bola
Ny fepetra famatsiana ara-bola dia tokony hoentina ho toy ny ampahany amin'ny paikady fampindramam-bola amin'ny fandaharan'asa fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny. Ny fanadihadiana ara-bola dia mandinika ny votoatin'ilay tetikasa, ny sehatra ara-barotra, ny asa aman-draharaha ara-barotra sy ny foto-drafitrasa, ary koa ny fandaniana manontolo, ny loharanom-panafody, ary ny banga. Ny paikady fampandrosoana maharitra dia manombana ny famatsiam-bola avy amin'ny loharanom-bolam-panjakana; bola avy amin'ireo mpanome fanampiana tsy miankina, orinasa na orinasa tsy miankina; ny fidiram-bola vokatry ny fidirana sy ny saram-pandefasana, ny fandoavana lamandy, ary ny fandoavam-bola hafa. Ny fanombanana dia manombana ny vola ilaina ary mamaritra ny elanelam-bola izay tsy maintsy fenoina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa na ny tanjona famerenana amin'ny laoniny. Ny fanadihadiana ara-bola dia manombana ny tontolon'ny lalàna, ara-panjakana, ara-tsosialy, politika ary tontolo iainana mba hamaritana ny rafitra ara-bola mahomby indrindra (jereo ny Torolàlana momba ny fitantanam-bola momba ny fiarovanamanokatra fisie PDF ).
Mba hanampiana hamantatra ny rafitra famatsiam-bola mahomby dia zava-dehibe ny mametraka fanontaniana manan-danja sasantsasany izay mamaly ny toe-draharaha misy eo an-toerana (ohatra: rafitra ara-bola, ara-dalàna, ara-panjakana, sosialy, politika ary tontolo iainana:
Ohatrinona ny vola ilaina isam-bolana mba hanohanana ny fandaharan'asa famerenana sy famerenana manokana
Afaka hiorina eo ambanin'ny rafitra ara-dalàna ankehitriny ve ny rafitra famatsiana napetraka?
Misy olona ampy tra-pahasahiranana (na sarotra ny manofana olona ampy) mba hikarakarana sy hampihatra ny rafitra?
Iza no handoa, ary inona ny fahavononany sy ny fahafahan'izy ireo mandoa?
Manohana ny governemanta ve ny governemanta vaovao?
Inona no fiantraikan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny fampiharana ny rafitra famatsiam-bola vaovao?
Fepetra enina mba hampivelarana sy hitazonana drafitra ara-bola maharitra (jereo ny Famatsiam-bola maharitra: lesona ianarana amin'ny fananganana sy fanohanana ny faritra arovana an-dranomasina mahombymanokatra fisie PDF ):
Fantaro ny filànao sy ny tsy fahampiana
Avereno jerena ny fahombiazan'ny rafitra fitantanana amin'izao fotoana izao amin'ny fanatrarana tanjona amin'ny fitantanana
Manombana ny sanda ara-tsosialy sy tombontsoa amin'ny fitantanana
Fantaro ireo loharanom-bola azo antoka sy mety
Manamboara drafitra momba ny fandraharahana sy ny fitantanam-bola izay manome vahaolana amin'ny vidin'ny vidiny amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fahaizan'ny fitantanana sy / na ny fidiram-bola avy amin'ny loharanom-bola vaovao na mety
Manaova dingana sy fomba fanatanterahana ny fanaraha-maso.
Araka ny nomarihina etsy ambony, dia mivoatra ny rafitra fanavaozana maharitra ara-pahasalamana, anisan'izany ny fananganana fitrandrahana sy famerenana amin'ny laoniny avy amin'ny tsena vaovao (oh: fikojakojana karbaona, rano, na fandoavam-bola hafa ho an'ny tolotra ecosystem). Ny fampivoarana ny politika sy ny toe-pahalalahana (ohatra, ny fanavaozana ny fanampiana ara-tontolo iainana manimba ny tontolo iainana sy ny famoronana fiantraikany tsara) dia manan-danja mba hanohanana ny ezaka fiarovana amin'ny fiarovana bebe kokoa. Ny ezaka hamolavola ny fitantanana sy ny famatsiam-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny orinasa eo an-toerana, ary mizara ny vola sy tombon-tsoan'ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana ao an-toerana (ohatra: ny vondrom-piarahamonina sy ny tompon-tany tsy miankina) dia ampiharina hatrany mba hanohanana ny famatsiana ara-bola maharitra eo amin'ny tontolo voajanahary.
Sehatra vaovao iray amin'ny famatsiam-bola maharitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny rafitra fiantohana haran-dranomasina. Ny mpanjifa (oh: fikambanan'ny hotely na orinasam-panjakana) dia mividy politikam-piantohana hamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina taorian'ny fiakaran'ny rivo-doza / rivodoza lehibe. Swiss Re, mpamatsy vola azo antoka, fiantohana ary endrika famindrana loza miorina amin'ny fiantohana, dia niara-niasa tamin'ny The Nature Conservancy, ny orinasa eo an-toerana ary ny governemanta State of Quintana Roo any Mexico mba hamolavola tahiry fitokisana (ny Coastal Zone Management Trust) ary politika fiantohana ho an'ny haran-dranomasina. Manangona ampahany amin'ny hetra fizahan-tany any an-toerana io vola io handoavana ny fikojakojana ny morontsiraka sy ny haran-dranomasina miampy ny fividianana fiantohana fiantohana hiarovana amin'ny rivo-doza mahery. Ny tetik'asa fanamoriana dia namolavola fiantohana fiantohana parametrika mandritra ny 40 kilaometatra amoron-dranomasina sy haran-dranomasina eo anelanelan'ny Cancun sy Puerto Morelos. Rehefa misy tafio-drivotra eo amin'ny tokonam-baravarana iray dia ampiasaina ny famerenam-bola amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina. Ny fomba parametric dia nisafidy satria manana rafitra fandoavam-bola haingana dia haingana izay midika fa misy vola azo alaina ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ilaina izany satria takiana ny vola handoavana ny vidin'ny fanadiovana ny vatoharan'ireo potipoti-javatra aorian'ilay tafiotra sy ny fanangonana vatohara tapaka ho an'ny tanjona famerenana amin'ny laoniny. Ny prototype momba ireo hetsika taorian'ny loza sy fiofanana ho an'ny "brigade" hitarika ny asa dia novolavolain'ny The Nature Conservancy. Ity tetikasa ity dia fotoana voalohany nananganana harena voajanahary ho an'ny sandan'ny fiarovana omeny ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny toekarem-pizahan-tany ary modely ho an'ny vokatra mitovy amin'izany izay mampifandray ny fiarovana ny natiora amin'ny karama aorian'ny voina.
Ny sehatra ara-bola iray hafa azo jerena dia ny fiantohana ny ala. Mampifandray ny fandrakofana nentim-paharazana amin'ny fatiantoka amin'ny rivo-doza izany amin'ny fampiasam-bola amin'ny faharetana (ohatra, ny fambolena ala honko, ny famerenana ny haran-dranomasina). Raha toa ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fiantohana (raha tsy misy ny volan'ny politika), dia ny fampiasana ny vidim-panafahana ny 'fampiasana' ny fampiasana ny 'familiana'. Tsy misy ohatra mahomby ho an'ny vahaolana "resilience" momba ny fiantohana izay mifototra amin'ny vahaolana natsangana, na izany aza MyStrongHome fandaharanasa dia ohatra iray amin'ny fampakarana ny trano fanavaozana (ho an'ny rivomahery manohitra ny rivo-doza) amin'ny alàlan'ny fiantohana tompon-trano. Ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana, toy ny The Nature Conservancy, dia miara-miasa amin'ny orinasa fiantohana sy fanoneranana mba hijerena raha mety hampihena ny fiantohana fiantohana ny orinasa / olona izay miaro ny vatohara sy ny ala amoron-drano, na ny alan'ny ala, toy ny fihenan'ny sakana sy ny toeram-pialokalofan'ny rivo-doza .
Famerenana amin'ny laoniny maharitra amin'ny alàlan'ny fizahantany
Fiaraha-miasa vaovao no jerena mba hamoronana fahafahana ara-bola maharitra vaovao hanohanana ny ezaka fanarenana ny haran-dranomasina amin'ny alalan'ny sehatry ny fizahantany. Ny Diviziona Karaiba ao amin'ny Nature Conservancy dia namolavola loharano maro hampiroboroboana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina mahomby amin'ny alàlan'ny asa sy fanao ara-pizahantany maharitra, anisan'izany ny REEFhabilitation Experience - traikefa fianarana an-tanana ho an'ny mpizaha tany mba handray anjara mavitrika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina. Ny REEFhabilitation dia natao ho traikefa azo amidy ho an'ny mpizaha tany ary manome famatsiam-bola maharitra ho an'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny, ary manome fahafahana ho an'ny mpizaha tany handray anjara amin'ny hetsika famerenana amin'ny laoniny sy hampiroborobo ny fanentanana ny haran-dranomasina. Raha te hidirana amin'ireo fitaovana mamaritra ity traikefa ity dia jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFizahan-tany maharitra – Fampifangaroana ny fivelomana pejin-tranonkala.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarohana momba ny fiarovana ny tontolo iainana: ny filàna sy ny sahan-dàlana amin'ny sehatra mampiroborobo
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanehoana ny fomba fiasa ara-bola maharitra azo avy amin'ny Fifanarahana momba ny fahasamihafana eo amin'ny biolojika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampiasam-bola amin'ny fiarovana: tetikasam-pambolena iray ho an'ny tsena mihandrona
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Torolàlana Iraisampirenena momba ny vola momba ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana momba ny fitantanam-bola momba ny fiarovanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTatitra fanampiny izay manasongadina ny famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny sehatra tsy miankina